Itshe Limi Ngothi Entsheni #YouthMonth - Vernac News
Sekuyileso sikhathi sonyaka futhi lapho intsha yakuleli izobe igubha inyanga yentsha jikelele. Sekuphele iminyaka engamashumi amane nanye yaqumbana phansi eSoweto phakathi koHulumeni wobandlulo nabafundi ababelwisana nemfundo yengcindezelo, nokufunzwa ulimi lwesiBhunu ezikoleni zabansundu. Iningi labafundi lendela kokhokho mhla zingu 16 kuNhlangulana 1976, singabala uHector Pieterson, nokunguyena namanje oseyisikhumbuzo sokwenzeka ngalowo nyaka. Kuyinhlalayenza ukuba lenyanga ithathwe ngeyokukhumbula lawo maqhawe, kulo lonke leli likaMthaniya, kubonakale nangemicimbi ehlelwayo. Yilesi sikhathi lapho sibona abantu abasha beziqhenya ngokuba yinxgenye yesizukulwane sanamuhla, noma kunjalo, kuyadingeka ukuba intsha iqonde kabanzi ubumqoka balolu suku.
Mumva-nje sekuyimvamisa ukuba abantu abasha bagubhe lolu suku ngokuzithokozisa ngophuzo oludakayo, nokuyinto evusa umbuzo wokuthi ingabe sisakwazi yini ukubaluleka kweJune 16. Impela ngeke sakuphika ukuthi intsha yango 1976 ihluke kakhulu kunentsha ka 2017, futhi nezikhathi azifani nhlobo. Babodwa abazobonakala ezinkundleni zokuxhumana (singabala uTwitter noFacebook) beshumayela ivangeli elilodwa, kanti futhi babodwa nabazobe begqoke imifaniselwano yezikole ababefunda kuzona nabazithandayo. Kodwa, iziqubulo ezifana no#Hashtag akuzona ezositakula kulo bubha intsha yethu ebhekane nabo, zingeke futhi zasakha ngokwephusile ukuze sithuthukise amaciko namakhono ethu. Ukujabula kuze kweqe kwethu thina ntsha yanamuhla kusenza sizishaye indiva izinto ezibalulekile, ngale nje kwalabo abathanda ubumnandi nokusebenzisa izidakamizwa, ekugcineni yithina futhi esizithola sisobungozini ngenxa yokungazinakekeli.
Izibalo ziyakhomba nazo ukuthi liyanda inani lentsha ezimbandakanya nezidakamizwa nophuzo oludakayo, nangaphezu kwezibalo zalabo abangasebenzi. UHulumeni wethu ubonakala uxegelwa amadolo uma kuziwa kwezokuphucula izimpilo zabantu abasha, lokhu siyakubona ngokungabikho kwamathuba emisebenzi. Enye yezimbangela zokudlondlobala kobugebengu eNingizimu Afrika yikho ukuthi sekugcwele izikhulu ezikhohlakele nezikhwabanisayo, nokuyinto ebangela ukuba inciphe imali okumele isebenze ekwakheni amathuba emisebenzi. Iyabalwa futhi nemicimbi ehlelwayo ukukhuthaza intsha ukuthi izibambe ziqine emiphakathini ekhungethwe wubumpofu nodlame. Zishaqisa igazi izigigaba esizibonayo nesizizwayo ngentsha yethu, lapho izimpilo zabesifazane nezingane ziba sengcupheni ngenxa yokungabikho kwemizamo yokuqwashisa intsha ngezinselela esibhekene nazo.
Izimpawu ziyakhomba ukuthi luselude ukhalo, kusekuningi okusamele intsha yakuleli ibhekane nakho. Noma uHulumeni wobandlululo ungasekho, kodwa zisekhona izinsalela zokungalingani kwamathuba, ikakhulukazi kwezemfundo. Lokhu sikubonile ngemibhikisho ezikhungwini zemfundo ephakeme kule minyaka emibili eyedlule, lapho abafundi bezwakalise ukungagculiseki ngokwandiswa kwemali yokufunda. Imikhankaso efana no#FeesMustFall yiyona esakhumbuza intsha ukuthi amaqhawe asala empini afana noHector Pieterson ayekubonile ukubaluleka kwemfundo, futhi kube yimfundo efinyeleleka kalula kubantu abansundu. Kuyiqiniso elingephikiswi ukuthi baningi abantu abasha abahleli emiphakathini ngenxa yokungabi nemali yokukhokha emanyuvesi, noma isabelomali siphuma minyaka yonke, kodwa dololo imfundo engakhokhelwa. Kubalulekile ukuthi ukuba musha kungagcini ngokukhuluma-nje, kodwa nezenzo zikhombise ukuthi siyintsha enentshisakalo yokubona iNingizimu Afrika enekusasa eliqhakazile.
Author: Hamilton Mnguni
Source: Hemiy Nguni